PineLoader inowanikwa mune vhidhiyo inoratidza kuti inoshanda | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapfuura tataura newe de PineLoader. Iyo software inobvumidza mbiri bhutsu, kana kunyanya "multi-boot", paLinux-based mobile terminals. Muvhiki ino takava nedzimwe mbiri pamusoro pazvo: wekutanga akatitaurira nezve itsva (ramangwana) piritsi iyo inomhanya Linux inoshanda system, inonzi pinetab, uye wechipiri akauya kwatiri muchimiro chemuenzaniso wekuratidzira umo matinoona software ichishanda.
Zvingave sei zvimwe, kana kuti, pane zvirinani kuita kuratidzira pane paPinePhone? Danct12 ndiye akatumira vhidhiyo pasocial network Twitter. Mariri, mumaminetsi anopfuura matatu chete, tinoona PinePhone inotanga nechinhu chakafanana neGRUB imomo 4 anoshanda masisitimu akaratidzirwa, pakati payo kutanga sarudza uye pinda postmarketOS uye Sailfish OS, ese ari maviri achishanda sezvanga zvichitarisirwa uye achitiyeuchidza zvishoma nezveviri / yakawanda-bhutsu yataizoita pane chero PC ine desktop inoshanda masystem.
PineLoader inotibvumidza kurodha akati wandei masisitimu anoshanda enhare mune imwecheteyo terminal
Uye heinoi #PineLoader muchiito pane yangu @ thepine64 #PinePhone!https://t.co/JaIeYto0D0
- Danct12 (@ RealDanct12) Dai 17, 2020
Uye heino PineLoader mukuita pane yangu PinePhone!
Tichifunga mutengo we zviteshi Pine64, iko kuvapo kwePineLoader inhau dzinonakidza kwazvo. Vazhinji vashandisi vangade kugona kuyedza in situ anoshanda masisitimu seUbuntu Kubata, asi postmartketOS inotaridzika kunge inotonhorera uye kune dzimwe sarudzo senge Sailfish OS inoratidzwa muvhidhiyo. Uye zvakare, kune dzimwe sarudzo dzatingave tisina kumbonzwa nezvadzo, senge Huang Tram Linux iyo inowanikwawo muvhidhiyo uye kuti dzakawanda zvekutsvaga kwatinogona kuita paGoogle. varikutitora kune ruzivo nezve PineLoader.
Chero zvazvingaitika uye kunyangwe zvese zvichitaridzika kunge zvakanaka kwazvo, isu tinofanirwa kuziva kuti mazhinji emapurojekiti, ese mashandiro esisitimu, senge software uye zviteshi. kutora matanho ayo ekutanga, saka isu tinofanirwa kuve nemoyo murefu kana izvo zvatinoda kukanganwa nezve iOS uye Android.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PineLoader inowanikwa mune vhidhiyo inoratidza kuti akawanda masisitimu anogona kumhanyisa pane imwechete Linux terminal